Ukuphucula uyilo lwezithuba zakho kunye nokufika komhlaba kwiWordPress ngeeShorcode zokugqibela | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UNacho morato | | Wordpress
Enye yeminqweno yakhe nawuphi na umntu xa bebesebenzisa iwebhusayithi eyenziwe ngeWordPress okwethutyana kukwandisa ukusebenza kwayo kwinqanaba lokubonwayo. Ukwazi ukusebenzisa ngokukhawuleza izinto ezichaziweyo kunye namandla ubeko lwezithuba kunye namaphepha ngobungcali.
Le yindlela ekhethwe yiWordPress kuhlobo lwayo 5, ukwazisa uGutengerb kunye neebhloko zayo njengomhleli. Kodwa ukubona zonke ezinye iindlela kwintengiso, zininzi, kufuneka sime kwi Iiplagi ezimfutshane zeeplagi ezigqibeleleyo. Ukudityaniswa kwezinto ezibonakalayo eziya kuba yimfuneko.
1 Yintoni i-shortcode?
2 Into endinokuyenza
3 Ezinye iindlela zokugqibela zeKhowudi emfutshane
Ikhowudi emfutshane sisiqwenga sekhowudi esichazwe kwangaphambili esinokongeza kumhleli wethu endleleni [ikhowudi emfutshane] [/ ikhowudi emfutshane] kwaye oko kusinceda ukongeza imisebenzi kwigalelo. Ziluncedo kakhulu kuba ziyasinceda ekupheliseni okanye ekuzenzekelayo imisebenzi ephindaphindwayo. Khawufane ucinge ukuba sithanda ukulumkisa abafundi bethu ukuba into abayenzayo ayiloxanduva lwethu. Ewe endaweni yokuyinika ifomathi ngalo lonke ixesha siyibhala, sinokwenza ikhowudi emfutshane [isilumkiso] ngemvelaphi ebomvu, umda kunye ne icon ngasekhohlo kwaye ngalo lonke ixesha sibeka isaziso sethu kufuneka sisongele isicatshulwa kunye nekhowudi emfutshane kwaye iya kuyitolika.
[uqaphele] Ingqwalaselo: Yonke into oyibonayo kule bhlog kufuneka yenziwe phantsi koxanduva lwakho [/ isilumkiso]
Kwaye lo ngumzekelo olula wazo zonke. Ukusuka apha sinokuqala ukwakha iifomathi zezicatshulwa, iividiyo, ubungqina kunye nayo yonke into ethi qatha engqondweni.
Kwaye ukuba asazi ukuba singayicwangcisa njani, kodwa sifuna ukuzisebenzisa zonke izibonelelo zeekhowudi ezimfutshane, kuya kufuneka sitsale iplagi :)
Apha ungabona isifundo malunga ne-plugin oya kuthi ufumane umbono wamandla ayo kunye nokusebenza ngokuchaseneyo kwaye kutheni le yenye yeeplagi ezisetyenzisiweyo ukongeza ukusebenza kwezinto ezinokubonakalayo kwizithuba zethu zeWordPress kunye nemixholo.
Inamandla ngokwenene. Isetyenziswa ngokubanzi ukongeza kwifomathi kumangeniso ebhlog, kulwakhiwo lomhlaba wentengiselwano. Iya kukunika imisebenzi ongakhange uyicinge.
Ukuba ucinga nge setha iwebhusayithi yakho ukuze ube nephothifoliyo yakho kwaye uzazise okanye uqale ishishini, kulula kakhulu, uya kufuna kuphela i-domain, ukubamba njenge ukusingathwa kwewebhu kwiWebempresa faka iWindowsPress enomxholo ochazwe kwangaphambili kwaye ungeze iiplagi ngokuthanda ;-) Iifutshane zeekhowudi yeyona nto ifunekayo ukuba ufuna ukuyila ngendlela elula nenamandla.
Ezinye iindlela zokugqibela zeKhowudi emfutshane
Njengoko siphawulile, eyona nto iphambili namhlanje ngumhleli omtsha weGutenberg kunye neebhloko kunye neeplagi ezinxulumene noko ezongeza iibhloko zesiko.
Iibhloko zeGutenberg eziPhucukileyo
Olunye ukhetho olufana nabakhi bembonakalo (i-Divi, iVisual Composer, njl. ukugoba okusabekayo. Kodwa oku siza kubona kwelinye inqaku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » Wordpress » Ukuphucula uyilo lwezithuba zakho kunye nokufika komhlaba kwiWordPress ngeeShorcode zokugqibela